Zonke iincwadi zikaCamilla Läckberg | Uncwadi lwangoku
Zonke iincwadi zikaCamilla Läckberg
Ngo-2003, umbhali oselula waseSweden wapapasha incwadi ebizwa ngokuba yiThe Ice Princess eyayiza kuthi ekugqibeleni ibe ngoyena mntu uthengisa kakhulu. Kwiminyaka elishumi elinesithandathu kamva, uCamilla Läckberg uye waba ngumgangatho Iileta zeNordic kunye noncwadi lomcuphi, njenge dolophu yakhe, Fjällbacka, I-epicenter yawo onke amabali ahamba phambili nepolisa uPatrik Hedström kunye nombhali uErica Falck. Sikwazisa Zonke iincwadi zikaCamilla Läckberg, ezithengise iikopi ezingaphezu kwezigidi ezingama-25 kwihlabathi liphela.
1 Zonke iincwadi zikaCamilla Läckberg
1.1 Inkosazana yomkhenkce
1.2 Ukumemeza kwexesha elidlulileyo
1.3 Iintombi zengqele
1.4 Ulwaphulo-mthetho oluphilayo
1.5 Imikhondo engacimekiyo
1.6 Isithunzi se siren
1.7 Ababukeli bendlu yokukhanya
1.8 Ukujonga kweengelosi
1.9 Ingonyama tamer
Inkosazana Yomkhenkce: ...
Incwadana yokuqala kaLäckberg yapapashwa ngo-2003 inombolo 1 eSweden kwaye iguqulelwa kwaye yapapashwa eSpain ngo-2006. Enye yeencwadi zombhali ezaziwayo yabonisa idolophu engaqondakaliyo iFjällbacka ngokuzibulala kuka-Alexandra, ibhinqa eliselula elinomhlobo wobuntwana, umbhali uErica Falck, owaziswa ngabazali bakhe kutshanje. uswelekile ukuba ibikukubulala ngokwenene. Kunye nepolisa uPatrik Hedström uya kuzama ukusombulula imeko.
Ngaba ungathanda ukufunda Inkosazana yomkhenkce?
Ukumemeza kwexesha elidlulileyo
Ukumemeza kwexesha elidlulileyo ...
Yapapashwa ngo-2004, inoveli yesibini kaLäckberg idibanisa kwakhona abalinganiswa abaphambili be-Ice Princess, u-Erica Falck noPatrick Hedström, ngeli xesha bekunye kwaye balindele umntwana. Imeko entle ejika ibe liphupha elibi xa esi sibini sithatha isigqibo sokuchitha ihlobo kwidolophu yaseFjällbacka, apho inkwenkwe ifumene nje umzimba wentombazana encinci kunye namanye amantombazana amabini anyamalele kwiinyanga ezidlulileyo, nto leyo ebangela Ibali elitsha eliqhubeka neskimu esinye kunye nesikhobokisayo somsebenzi wombhali waseSweden nangona ngeli xesha ibali liqinisekile kwaye lijijekile.
Lee Ukumemeza kwexesha elidlulileyo.
Iintombi zengqele ...
Amabali kaLäckberg ayazibandakanya, etsala umfundi kwi-turf yabo kwaye abenze bavumelane ukukhangela umbulali esinqwenela ukufumanisa ngazo zonke iindleko. Izinto eziwuguqule umsebenzi walo mbhali waba lukhonkco kubathandi be Uncwadi lomcuphi, ukuba Iintombi zengqele Esinye sezihloko zakhe eziphambili, ngeli xesha zapapashwa eSweden ngo-2005 naseSpain kwiminyaka emine kamva. Kwiintombi ezibandayo, abalinganiswa abaphambili sele bengabazali, ngokuhambelana nokubonakala kwesidumbu sikaSara, intombi yomhlobo ka-Erica owarhaxwa ngaphambi kokuba aphoswe emazantsi olwandle.
Ulwaphulo-mthetho oluBukhoma: A ...
Kwiintsuku ezingaphambi komtshato kaErica noPatrick, isibini esomeleleyo esinentombi, uMaja, sineenyanga ezisi-8 ubudala, usodolophu waseFjällbacka ubhengeza ukufika kweqela labadlali kumabonakude abaza kwenza umboniso wokwenyani "Fucking Tanum", ofana noGran Brother . Nangona eli linge lithembisa ukuzisa izibonelelo ezininzi kubemi, ifilimu ijika ibe sisihogo xa elinye lamalungu enkqubo libonakala libulewe, lonyanzela uPatrick ukuba aphande ngetyala kwaye oyike ubomi bentombazana yakhe encinci.
Awukafundanga Ulwaphulo-mthetho oluphilayo?
Amanqaku angenakucimeka: ...
Emva kokuphela kwehlobo, umbhali uErica ubuyela emsebenzini wakhe ngelixa iqabane lakhe, uPatrick, lihlala lijongana nentombi yabo uMaja okwethutyana. Ukuzinza okushunqulwe kwakhona xa isidumbu sikaErik Frankel, umbhali-mbali owaziwayo weMfazwe yesibini yeHlabathi, sivela kufutshane neFjällbacka.
Lee Imikhondo engacimekiyo.
Isithunzi se siren
Isithunzi se-siren: ...
Ipapashwe eSweden ngo-2008, Isithunzi se siren ubala njengomntu ophambili kunye Fjällbacka Umgcini welayibrari uChristell Thydell, olixhoba lokukhohliswa emva kokupapashwa kwinoveli yakhe yokuqala, La sombra de la sirena. Intsomi eyimfihlakalo enemvelaphi yosapho egwebayo egweba umhlobo wakhe uMagnus ukuba afe phantsi komkhenkce, evula ityala elitsha ukuba liphandwe nguErica noPatrik.
Ababukeli bendlu yokukhanya
Ababukeli bendlu yokukhanya ...
Into ebonakalayo ayisileli kumabali ayimfihlakalo kaLäckberg, ekubeni Ababukeli bendlu yokukhanya enye yezona zinto zingaphezu kwendalo kuzo zonke. Kule ncwadi, saziswa ngo-Erica sele ekhulelwe amawele kwaye enexesha elincinci kakhulu lokundwendwela uAnnie, umhlobo ovela kwisikolo samabanga aphakamileyo ogqibe kwelokuba abuyele eFjällbacka. Iyelenqe liqala ukuba nzima xa usapho olusandula ukufika luthatha isigqibo sokufudukela kwisiqithi saseGraskar, esihlala imimoya yakudala, umoya wentombi yakhe endala, uMatte, ekubeni inguye kuphela uAnnie anokumbona xa ebonakala ebulewe.
Inkangeleko yeeNgelosi ...
Kule noveli intsha sesinye isiqithi, iValö, indawo esisazulu esijikeleza kuyo yonke imfihlelo yecebo elitsha. Indawo apho isibini esitshatileyo esenziwe ngu-Ebba noMåten sigqibe ekubeni sihambe emva kokubhubha konyana wabo omncinci kwaye kwifama yosapho i-Ebba yanyamalala kwiminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo ngenxa yomlilo ngaphandle kwengcaciso okanye uphando. U-Ebba, owayengenamnyaka ubudala xa wafunyanwa, uyaqhubeka nokufumana iminqweno yokuzalwa evela kumthumeli ongaqondakaliyo ogama lakhe liqala ukuphandwa nguPatrik noErica.
Ungaphoswa Ukujonga kweengelosi.
Ingonyama tamer ...
Phakathi kuJanuwari, eyona nto ibanda kakhulu eFjälbacka, umfazi osemncinci ohamba ze uyema embindini wendlela apho athe wahlaselwa yimoto. Emva kokuba umzimba uchongiwe, kwafunyaniswa ukuba ixhoba lanyamalala kwiinyanga ezine ezidlulileyo kwaye, ngokokulimala okuninzi nokunxiba okunxibileyo, wabulawa ngumhlaseli ongaziwayo. Ityala elaphandwa nguPatrik, lenzeka ngokuhambelana nokulandelwa kwedrama yosapho ngumfazi wakhe uErica.
Lee Ingonyama tamer.
Igqwirha: Camilla ...
Inoveli yamva kaLäckberg Yapapashwa ngo-Matshi 1 kwilizwe lethu ngendlu yokupapasha iMaeva kwaye iyaqhubeka kwakhona kufutshane neFjälbacka. Kweli bali litsha, umbhali uzntywilisela ekuzingeleni igqwirha okuqhubeka ukubakho kwinkulungwane yama-XNUMX kwaye oko kuyaqhuma kwakhona emva kokuvela kwesidumbu sentombazana eneminyaka emine ubudala. Indawo yolwaphulo-mthetho efana naleyo yenzeka kwiminyaka engamashumi amathathu eyadlulayo, xa abantu ababini abancinci babetyholwa ngokubulala bengakhange bakwazi ukuvalelwa ngokuba ngabantwana, baphinde bavele kwakhona xa olu lwando lutsha luphandwa ngu-Erica noPatrrik lwenzeka.
Awukafundanga Igqwirha nguCamilla Läckberg?
Ngaba ungathanda ukufunda zonke iincwadi zikaCamilla Läckberg kwaye ukhohliswe ngumfazi omnyama waseSweden?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Ezahlukeneyo » Zonke iincwadi zikaCamilla Läckberg
ILlera Pacios Ivenkile yeeVenkile sitsho
AbaseSweden banesipho sendalo senoveli zabacuphi, ngokuqinisekileyo sisindululo esihle kakhulu.
Phendula kwiLlera Pacios Ivenkile yeeNcwadi
Ndiyazithanda iincwadi zakhe, umbhali wam endimthandayo ...
UGenina Glenda Giliberto sitsho
Ndizifunde phantse zonke iincwadi zikaCamilla; Eyona ifikelele entliziyweni yam yile: Imikhondo yeenyawo engenakuchazeka. Sivuyisana nombhali omangalisayo, osenza sihleke, sikhale kwaye singalibali elidlulileyo.
Phendula uGenina Glenda Giliberto
Iindaba ezi-4 zokuhlela kwinyanga yesine yonyaka